Malunga nathi -Yantai Joyshing Glass Co., Ltd.
Yantai Joyshing Glass Co., Ltd. njengomvelisi ezizodwa kunye phambili kunye nomthengisi iimveliso ezahlukeneyo zeglasi e-China, ijolise ukunika phambili enye-stop isisombululo iglasi ulwakhiwo, umhombiso, ukuthuthwa, ukuziphendulela, ukuzonwabisa & ezemidlalo njalo njalo. Iglasi iJoyshing igxile kakhulu ekwenziweni kweglasi egosogoso. Sinako ukuvelisa iglasi egosogoso intle kunayo nayiphi irediyasi kwaye iglasi yethu egosogoso iza nokuba ifakwe, ilaminethiweyo, ubushushu (uthambile), kwaye iphindwe kabini, ukuhambelana neemfuno zakho. Izicelo eziqhelekileyo zeglasi yethu egosogoso zibandakanya iivenkile ezigoso zeefestile, iifestile ezigobileyo, iiglasi ezigobileyo zeglasi kunye nezikrini zokuhlamba ze-bespoke.
Siyazingca ngokhuphiswano lwethu olomeleleyo oluvela kubuchwephesha obuphambili kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo. Sisoloko sizinikele kuphando kunye nophuhliso lweendlela eziphambili zokwenziwa kwaye saphumeza ulawulo lomgangatho olungqongqo ngenyathelo ngalinye lokuqinisekisa iimveliso ezifanelekileyo. Njengenye yamashishini aphambili, UKONWABISA kunokunika uluhlu olubanzi lweemveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso okhuphiswano.Iglasi eValiweyo eseCurved, egoba iglasi egudileyo, yiglasi yokhuseleko eveliswa ngenkqubo yokugoba iglasi ngaxeshanye kunye nonyango olushushu. Inkqubo esetyenzisiweyo yokufumana iglasi egudileyo egudileyo iJoyshing iglasi iqulethe ukufudumeza iglasi ethe tyaba ukuya kwinqanaba leplastikhi, inika ukugoba okufunwayo kwinkqubo yokubila kweglasi ziijethi zomoya obandayo.
Ngaphandle kwetekhnoloji ephezulu kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo, ukonwaba kukhuphiswano olomeleleyo kukwavela kwinkonzo enobungcali kunye nobungcali. Iqela likaJOYSHING elinamava kunye neqela lobuchwephesha ngokuqinisekileyo linokubonelela ngenkxaso ebalulekileyo kunye nefunekayo nasemva kwenkonzo yokuthengisa ukuze kuqinisekiswe ukuba zonke iimfuno zabathengi, nokuba zinkulu okanye zincinci, zinokwaneliseka ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Iglasi egobileyo egobileyo inyuke ngokunyuka okuphindwe kane xa kuthelekiswa neglasi efakwe kubukhulu obufanayo kwaye ukuba yaphukile, yaqhekeka ibe linani elingenakubalwa lamaqhekeza amancinci ngaphezulu okanye ngaphantsi kwemilo yeetyhubhu.
Iglasi egobileyo (edibeneyo) inokusetyenziselwa ukongeza imigca egudileyo eya kwisakhiwo. Ukulungele ukusetyenziswa kwii-shopfronts, i-balustrades ye-balcony okanye i-staircase, iglasi egobileyo (edibeneyo) ingongeza ukwahluka okhethekileyo kwikhaya eliyilelwe ngokwakha.